Tag: netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta | Martech Zone
Tag: netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta
Etu esi eji Social Media maka obere azụmaahịa
Satọde, Ọgọstụ 8, 2015 Douglas Karr
Ọ dịghị mfe dịka ndị mmadụ na-eche. Chọpụta, mgbe afọ iri nke ịrụ ọrụ na ya, enwere m otu ọhụụ mara mma na mgbasa ozi mgbasa ozi. Mana obere azụmaahịa anaghị enwe afọ iri iji bulie ma mepụta ngwa ngwa na atụmatụ ha. Ọbụna na obere azụmaahịa m, ikike m nwere ime atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta ọha na eze nke ukwuu maka obere azụmaahịa m bụ ihe ịma aka. Amaara m na ọ dị m mkpa ịnọgide na-eto eto m
Nzọụkwụ 12 na Social Media Marketing Successga nke Ọma
Satọde, Satọdee 13, 2014 Sọnde, Septemba 14, 2014 Douglas Karr
Ndị folks na BIGEYE, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ okike, achịkọtala ihe omuma a iji nyere ụlọ ọrụ aka ịmepụta atụmatụ azụmaahịa mgbasa ozi na-aga nke ọma. Enwere m mmasị na nkwụsị nke usoro mana enwere m ọmịiko na ọtụtụ ụlọ ọrụ enweghị ihe niile iji nweta ihe dị mkpa maka usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Nloghachi na iwulite ndị na-ege ntị na obodo na ị nweta nsonaazụ azụmaahịa atụpụtara na-ewe ogologo oge karịa ndidi nke ndị isi